မီးရထားစနစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် 'ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု' ကိုဆမ်မလိတ်ခေါ်ဆိုခြင်း - RayHaber
[15 / 10 / 2019] BALOSB သည် Balikkesir သာမကဒေသကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်	10 Balikesir
[15 / 10 / 2019] Gebze ခရီးသွားကဒ်များရုံးသည် New Place သို့ပြောင်းသည်	41 Kocaeli
[15 / 10 / 2019] IMM မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထိပညာရေး5ပစ္စည်းဥစ္စာငလျင်အစီအစဉ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[15 / 10 / 2019] ပိုလန်မီးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်Stepရာမခြေလှမ်း	48 ပိုလန်
[15 / 10 / 2019] Metrous မတော်တဆမှုများ Insidious Sabotage ဆန့်ကျင်မှု Imamoglu	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[15 / 10 / 2019] ပိုးလမ်းမ၏ပထမအကြိမ်5ရထားသည်နိုဝင်ဘာလတွင် Marmaray ကိုဖြတ်ကျော်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[15 / 10 / 2019] ဂျကာတာ Surabaya မီးရထားစတင်ပြေးဆွဲ	62 အင်ဒိုနီးရှား
[15 / 10 / 2019] ပြည်တွင်းချေးငွေအထူးယာဉ်ချေးငွေအစီအစဉ်တွင်ကုမ္ပဏီသစ်ပူးပေါင်း	06 တူရကီ
[15 / 10 / 2019] Bursa မှ Durmazlar သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရထားများထုတ်လုပ်လိမ့်မည်	16 Bursa
[15 / 10 / 2019] Bozanka ဖို့တူရကီရဲ့မာန	06 တူရကီ
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ55 Samsunကို 'ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု' 'ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရထားသီချင်းများထဲကနေsamulaş
23 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, ရထားလမ်း, PHOTOS, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Samulaş, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်က samulas ၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု cagrisi တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ဘီး Project မှအကြီးစိတ်ဝင်စားမှုဆွဲဆောင်သည့်ပတ်တီးတာကိုအခါနယူးမျိုးဆက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားနည်းပညာညီလာခံအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် '' Localization '' တင်ဆက်မှုအာရုံကိုsamulaş
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေ။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc ကို (SAMULAŞ), အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပသည့်မီးရထားနည်းပညာမှာနယူးမျိုးဆက်ညီလာခံ, 'Yerlileştirilmesiများအတွက်တင်ဆက်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာထွက်ပေးဆောင်။ အဆိုပါကွန်ဖရလည်းထုတ်လုပ်မှုsamulaşပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်တီးဘီးစီမံကိန်းကိုလည်းအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမမြင်စဖူးသည်။
တူရကီအတွက်မြို့ပြရထားလမ်းအော်ပရေတာ, အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပနယူးမျိုးဆက်ရထားနည်းပညာညီလာခံအတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ foreground ကsamulaşအားလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပေါ်လာတာဟာအရင် '' Localization '' လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်ရထားလမ်းစနစ်, အတွက်အသုံးပြုတဲ့အစိတ်အပိုင်းဤအရေးကြီးသောညီလာခံအတွင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Zia Calafat နှင့်ဂျနီဖာ Belen ကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်မှုကိုဖန်ဆင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Zia Calafat ညီလာခံ '' ခံရသည့်လိုအပ်သောအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ Localization '' ။
ခေါ်ဆိုရာမှSAMULAŞ: Strategic PRODUCT သည်ရှိမရှိ
ထိုကဲ့သို့သော Aselsan နှင့် TUBITAK များ၏ကိုယ်စားလှယ်များရထားလမ်းအဖြစ်စနစ်အော်ပရေတာအဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Metro Izmir လည်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးချဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆင်ရေး၏အထင်ရှားဆုံးကုန်ကျစရိတ်နေသောစားသုံးသူများ, အစားတင်သွင်း "ညီလာခံSAMULAŞဒုတိယသမ္မတ Zia Calafat ပါဝင်ခဲ့။ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်အရေးအပါဆုံးခြေလှမ်း, ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ '' မဟာဗျူဟာမြောက်ထုတ်ကုန် '' အတိုင်းအတာခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှတဆင့်အထူးသဖြင့် KOSGEB ဤကိစ္စကိုမှကျိုးပဲ့လျက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
wheel ပတ်တီးဒေသခံ PRODUCTION
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြစီမံကိန်းကိုပြီးနောက်ဘီးတာယာများ၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်တက္ကသိုလ်, 'ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ' 'အလုပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သွား, အsamulaşတွေထဲကအရေးကြီးဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကို item' 'ဘီးပတ်တီး' 'အလုပ်နှင့်ကွန်ဖရ Zia Calafat ပါဝင်သမျှသောဧည့်သည်များမှရှင်းပြအကြောင်းကိုလုပ်ဒီအမှတ်ပါဝငျ ကျနော်တို့ကိုပေး။ ဒါကကျနော်တို့တူရကီအတွက်ဘီးကုမ္ပဏီ၏ürettimရိုးရိုးအနာကပ်ပရန်သဘောတူအောင်သည်အဘယ်မှာရှိSAMULAŞကျေးဇူးတင်စကားအဖြစ်သိသာဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးပြီးပါပြီ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အီတလီနှင့်တရုတ်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ဒုတိယသမ္မတသူတို့ကဒေသခံလမ်းရထား Zia Calafat စတင်သုံးစွဲကြောင်းသတိပေး Samsun, "ဟုအဆိုပါရထားလမ်းစနစ်၏အော်ပရေတာ, ဘီးတာယာအဖြစ်ကိုအများအတွက်အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဒီအဘို့, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျနော်တို့အကြောင်းကို 20 ယူရိုသန်းdışınrပြည်ပမှာဝယ်ယူကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ခဏအကြာဘီးတာယာများ၏ထုတ်လုပ်မှုပြောင်းရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီပစ္စည်းရဲ့ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်ငါတို့သည်ကြောင့်ပေါင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သန်းပေါင်းများစွာဖြစ်နေဆဲကြောင်းသေချာစေရန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဟုသူကပြောသည် "ငါတို့SAMULAŞအတိုင်းဤဦးတည်ချက်အတွက်အရေးပါသောဥပမာများကယုံကြည်ကြသည်။
အဆိုပါတူရကီက Metro ၏အစိတ်အပိုင်းများဒေသခံထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ရယူထားခြင်း 24 / 06 / 2012 အဆိုပါတူရကီက Metro ၏အစိတ်အပိုင်းများပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများမှ: Metro န်ထမ်းများ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတ္တအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ, ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ထောက်ပံ့သောတူရကီ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအပေါ် မူတည်. ။ ငွေစု5တထောင်အတွက်5နှစ်ပေါင်း 700 သန်းဒါ, အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများကိုတူရကီက Metro ၏လယ်ပြင်တွင်တူရကီကုမ္ပဏီအများစုပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုအဓိကအလှူငွေပေးခွငျးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဤအစိတျအပိုငျးမိတ်ဆက်တူရကီကုမ္ပဏီများနှင့် "အပိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲ" တွင်အကျိုးစီးပွားတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက်အပိုပစ္စည်းတူရကီက Metro ထောက်ပံ့ဖို့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူပိုနှစ်သက်သူကို "ကုန်ပစ္စည်း Localization စီမံကိန်း" ။ နမူနာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Metro အတွက်အသုံးပြုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ရှိရာပြပွဲ ...
အပိုပစ္စည်းများ၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများထံမှထောက်ပံ့ထားတဲ့တူရကီက Metro, 20 / 06 / 2012 ထို့ကြောင့်တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်5နှစ်5700 တထောင်သန်းကယ်တင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါတူရကီက Metro န်ထမ်းများကလိုအပ်တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အတ္တ, အပိုပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေပေါ် မူတည်. ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကစီစဉ်ပြပွဲမှမိတ်ဆက်ကြသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ဖွဲ့စည်းပြပွဲ၏အတ္တအဖွင့်, အထွေထွေမန်နေဂျာ Necmettin Tahiroğlu OSTIM Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌ Orhan Aydınမြူနီစီပယ်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနမှဥက္ကဋ္ဌ Kemal, တူရကီက Metro အထွေထွေဒါရိုက်တာ Rahmi Akdogan နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဗျူရိုကရက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်သန့်ရှင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ တူရကီက Metro 80 ထုတ်ကုန် localization project ၏အပိုပစ္စည်းစံချိန်တင်အရာရှိများ, တိုးတက်မှု၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများထံမှထက်ပိုပြီး ...
Metro နှင့် Ankaray Display ကိုအပေါ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအပိုအစိတ်အပိုင်းများ 22 / 05 / 2013 ပြည်တွင်းသတင်းရပ်ကွက်များအနေဖြင့်စည်ပင်သာယာရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် created စီမံကိန်းရုံးအလုပ်တူရကီမြို့တော်နယ်ပယ်, "က Metro နှင့်ဒေသခံ Ankaray အပိုအစိတ်အပိုင်းများပြပွဲ" ကိုဖွင့်။ ပြည်တွင်းသတင်းရပ်ကွက်များအနေဖြင့်စည်ပင်သာယာရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် created စီမံကိန်းရုံးအလုပ်တူရကီမြို့တော်နယ်ပယ်, "က Metro နှင့်ဒေသခံ Ankaray အပိုအစိတ်အပိုင်းများပြပွဲ" ကိုဖွင့်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, တူရကီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Aso) နှင့် OSTIM သည့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှာတူရကီက Metro စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြပွဲ, အတ္တရထားဌာနမှူး Kemal သန့်ရှင်းOSTİMနည်းပညာ Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌသက်သာစေသောဆေးကိုပေးÇelikdogဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကစီစဉ်။ စင်ကြယ်သော Kemal, တူရကီ, တိုင်းရင်းသား 80 ကျေးဇူးတင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု "သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းကနေပိုပြီးထောက်ခံမှုမျှော်လင့်ထားပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ကိုအပိုင်းပိုင်း၏တူရကီက Metro နှင့် Ankaray ပြပွဲလုပ်ပါလိမ့်မည် 21 / 05 / 2013 ပြပွဲအတ္တသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ, OS နှင့်ငါ ARUS ကျင်းပလိမ့်မည်များအတွက်တူရကီက Metro ရထားနှင့် Ankaray အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်လိမ့်မည် တူရကီက Metro ရထား Ankaray ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ပြပွဲအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်စည်းရုံးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဒေသခံထုတ်လုပ်ရန် Metro နှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များတွင်အသုံးပြုသော 22-24 မေလ 2013 နေ့စွဲ Ankaray အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများအကြား။ သူတို့စိတျအပိုငျးထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတ္တများ၏ပြပွဲနှင့်ဒေသခံလာ Arus တူရကီစက်မှုလုပ်ငန်းအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုနှင့်အမျိုးသားစီးပွားရေးသည်အသိပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်, ဟာ့ဒ်ဝဲ, မကြာသေးမီကအားလုံးမြေအောက်ရထား, အလင်းရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများတူရကီအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအစုံစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ရန်ယုံကြည်ကြသည် ...
ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုရထားယာဉ်ပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 12 / 01 / 2018 ပထမဦးစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဒီဇင်ဘာလ 20 21-2017 11 နေ့စွဲများတွင်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဇန်နဝါရီလ 12 2018 ကဏ္ဍအပေါ်ပြုပြင်အုပ်စုအားလုံးအများပိုင်အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဒုတိယ session ရဲ့အထူးပြုကော်မတီများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်, ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ရထားယာဉ်စနစ်များပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုယ်စားလှယ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူတူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ လက်ထောက်အထွေထွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏မန်နေဂျာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုBayrakçılအစည်းအဝေး Jalaluddin Yurtseven နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mustafa ၏ရုံးဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်အတူတူရကီအတွက်xnumx.kalkın Plan ကို "ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အဖွဲ့ရထားစနစ် Tools များပေါ်တွင်" မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအောက်မှာဖှဲ့စညျး, ထိုကဲ့သို့သောစနစ်နှင့်လမ်းရထားနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအဖြစ်အလင်းရထားလမ်းထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများနှင့်အတူလျှပ်စစ်ရထားအစုံ, လျှပ်စစ်စက်ခေါင်း, မြေအောက်ရထား, အအစွမ်းကုန်ဖွစျလိမျ့မညျ ...
IMM မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထိပညာရေး5ပစ္စည်းဥစ္စာငလျင်အစီအစဉ်
Klassis 30 ။ ယင်း၏အသက်အရွယ်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်
Metrous မတော်တဆမှုများ Insidious Sabotage ဆန့်ကျင်မှု Imamoglu
Bursa မှ Durmazlar သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရထားများထုတ်လုပ်လိမ့်မည်
Peace Spring Operation သို့ Antalya Metropolitan မှအထောက်အပံ့ပေးသည်
ကမ်းခြေပေါ်ရှိစက်ဘီးသည် Mersin ၏လူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်
အဆိုပါတူရကီက Metro ၏အစိတ်အပိုင်းများဒေသခံထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ရယူထားခြင်း
Metro နှင့် Ankaray Display ကိုအပေါ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအပိုအစိတ်အပိုင်းများ
ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ကိုအပိုင်းပိုင်း၏တူရကီက Metro နှင့် Ankaray ပြပွဲလုပ်ပါလိမ့်မည်
ရထားစနစ်များအတွက် 70 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, တိုင်းရင်းသားကုမ္ပဏီများခေါ်ရန်ထောက်ခံနေကြတယ်
native ခြံထွက်ပစ္စည်းရထားစနစ် Prysmian ကြေးနန်းကနေ
Beşikdüzü Cable ကိုကားလိုင်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းပိုင်းမှာရောက်ရှိ
Metro နှင့်ဒေသခံ ANKARAY အပိုအစိတ်အပိုင်းများပြပွဲ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (252) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)